Mkpụrụ Ọkpụkpụ Cannabis Oligopeptide Powder - Manufacturer Factory
Semen Cannabis Oligopeptide ntụ ntụ bụ obere peptide molekụla amịpụtara site na mmiri peptides nke cannabis site na mgbagwoju mmiri dị ala enzymatic hydrolysis. Ọ bara ọgaranya na arginine, glutamic acid, histidine, methionine, cystine. Ọzọkwa, ọ gaghị eme ka afọ mgbatị ahụ - ọgbụgbọ na mmeghachi omume nfụkasị.
Semen Cannabis Oligopeptide Powder vidiyo
Semen Cannabis Oligopeptide ntụ ntụ nkọwa
Product Name Semen Cannabis Oligopeptide ntụ ntụ
Agba Yellow ma ọ bụ Ìhè odo
Gịnị bụ Semen Cannabis Oligopeptide ntụ ntụ?
Ka ọ dị ugbu a, a na-ejikarị mmanụ oligopeptide eme ihe maka ngalaba nlekọta ahụike na nri ọrụ.
Kedu uru nke Semen Cannabis Oligopeptide ntụ ntụ?
Mee ka ogwu na usoro nri
Mkpụrụ mmanya na-eme ka mmiri nwee ike ịhazi ahịhịa nke eriri afọ, nke nwere ụzọ ọgwụgwọ abụọ na afọ ntachi na afọ ọsịsa. N'otu oge, ọ nwere ezigbo mgbochi ọnya na gallbladder na-akwalite mmetụta.
Analgesia, mgbochi mbufụt
Mkpụrụ mmanya na-eme ka peptide ntụ ntụ nwere ọgwụ analgesic na mgbochi nflammatory.
Nyere aka na hypolipidemic na hypoglycemic
Mkpụrụ ọka mmanya peptide ntụ ntụ nwere ike belata ọbara mkpokọta cholesterol na triglyceride, yana ọkwa shuga dị n'ọbara. Ọ nwekwara mmetụta nke ịhazi lipids ọbara na ọbara shuga.
Mgbochi ike ọgwụgwụ ma melite ọgụ
Semen cannabis peptide ntụ ntụ nwere ike melite mmega ahụ, mekwuo ọdịnaya glycogen imeju, belata ọbara lactic acid, urea nitrogen ọbara, nwere mmetụta antifatigue; Ke adianade do, ọ nwere ike budata rụọ ọrụ na-arụ ọrụ na-adịghị mma nke mgbochi cellular, ọkachasị ikike ịba ụba nke Tlymphocytes na phagocytes, yana oke-ly na-eme ka ọrụ ahụ ghara ịdị na ya.
Antioxidation, anit-ịka nká
Mkpụrụ osisi peptide ntụ ntụ nwere ọrụ antioxidant, nke nwere ike iwepụ ihe ndị na-enweghị ihe ọ bụla ma belata ogo nke peidide lipid, si otú a na-arụ ọrụ mgbochi.
 Ihe omumu banyere ogwu ogwu nke digestive system nke Hemp Kerne
 Acupuncture, Anti-lnflammatory, Antithrombotic Mmetụta nke Mkpụrụ Hemp.
 Mmetụta nke Hemao Protein Powder na Ọrụ Nri na Ahụike nke Oke na Oge Na-eto Eto.
 Mbido Study on mgbochi ike ọgwụgwụ na Dịghịzi RegulationFunction nke Hemp Mkpụrụ protein na ụmụ oke.
 Ọrụ Antioxidant nke ngwaahịa Enzymatic Hydrolysis nke Hemp